Duuliye halyay ah oo geeriyooday - BBC News Somali
28 Maarso 2019
Afduubkaas ayaa dhacay sannadkii 1976.
Afduubkii ayaase lix maalmood ka dib ku soo dhammaaday garoonka diyaaradaha ee Entebbe ee dalka Uganda, ka dib markii kumaandoosta Israa'iil ay hawlgal ka fuliyeen garoonka.
Duulimaadyada qarsoodida ah ee laga been sheego?
Su'aalo la'iska weeydiinayo Boeing kadib shilkii Itoobiya
Maxaa sababay sii deynta duuliyihii Hindiya ee ay Pakistan heysatay?
Bacos ayaa ku dhintay magaalada Nice ee dalka Faransiiska.
Wuxuu ku guulaystay abaalmarinta ugu sarraysa ee qof shacab ah la siiyo ee Légion d'Honneur, sannadkii 2016 ayuu BBC-da u shegay "in aysan macquul ahayn in uu rakaabka isaga tago isaga oo duuliyahoodii ah."
Benny Davidson oo ah qofkii ugu da' yaraa ee ka badbaada afduubkii Entebbe ayaa sheegay Bacos uu ahaa muunad uuna door hoggaamineed u muujiyay rakaabkii.
Duqa magaalada Nice Christian Estrosi ayaa sheegay "in Michel uu ahaa halyay. Uuna si geesinimo leh u diiday Yuhuud nacaybka iyo axmaqnimada, isla markaasna uu sharaf u soo jiiday Faransiiska.